2 Ihe E Mere 23 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
2 Ihe E Mere 23:1-21
23 N’afọ nke asaa, Jehoyada+ nwere obi ike wee kpọrọ ndị isi nke otu narị otu narị ndị agha,+ ya bụ, Azaraya nwa Jeroham na Ishmel nwa Jehohenan na Azaraya nwa Obed na Measaya nwa Adaya na Elishefat nwa Zikraị, ya na ha wee gbaa ndụ. 2 E mesịa, ha gagharịrị Juda dum wee si n’obodo niile dị na Juda kpọkọta ndị Livaị+ na ndị isi+ nke ọnụmara dị iche iche+ nke Izrel. Ha wee bịa na Jeruselem. 3 Ọgbakọ ahụ dum na eze wee gbaa ndụ+ n’ụlọ+ ezi Chineke, e mesịa, ọ sịrị ha: “Lee! Nwa+ eze ga-achị,+ dị nnọọ ka Jehova kwere ná nkwa banyere ụmụ Devid.+ 4 Ihe unu ga-eme bụ: otu ụzọ n’ụzọ atọ n’ime unu bụ́ ndị na-abata n’ụbọchị izu ike,+ n’ime ndị nchụàjà+ nakwa n’ime ndị Livaị,+ ga-eche ọnụ ụzọ nche;+ 5 otu ụzọ n’ụzọ atọ ga-anọ n’ụlọ eze;+ otu ụzọ n’ụzọ atọ ga-anọ n’Ọnụ Ụzọ Ámá Ntọala;+ mmadụ niile ga-anọ n’ogige+ ndị dị n’ụlọ Jehova. 6 Unu ekwela ka onye ọ bụla bata n’ụlọ Jehova+ ma e wezụga ndị nchụàjà na ndị Livaị na-eje ozi.+ Ọ bụ ndị a ga-abata, n’ihi na ha bụ ìgwè dị nsọ,+ mmadụ niile ga-arụkwa ọrụ ha kwesịrị ịrụrụ Jehova. 7 Ndị Livaị ga-agbakwa eze gburugburu,+ onye nke ọ bụla ga-eji ngwá agha ya n’aka; onye ọ bụla batara n’ụlọ ahụ, a ga-egbu ya. Unu na eze soro mgbe ọ na-abata abata na mgbe ọ na-apụ apụ.” 8 Ndị Livaị na Juda dum wee mee ihe niile Jehoyada+ onye nchụàjà nyere n’iwu.+ Onye ọ bụla n’ime ha wee kpọrọ ndị ikom ya bụ́ ndị na-abata n’ụbọchị izu ike, tinyere ndị na-apụ n’ụbọchị izu ike,+ n’ihi na Jehoyada onye nchụàjà ekweghị ka ìgwè dị iche iche+ kwụsị ọrụ. 9 Jehoyada onye nchụàjà nyekwara ndị isi nke otu narị otu narị ndị agha+ ube na ọta na ọta ndị dị okirikiri+ nke Eze Devid,+ bụ́ ndị dị n’ụlọ ezi Chineke.+ 10 O wee debe ha niile+ n’ebe dị iche iche gbaa eze gburugburu, malite n’akụkụ aka nri ụlọ ahụ ruo n’akụkụ aka ekpe ụlọ ahụ, n’akụkụ ebe ịchụàjà nakwa n’akụkụ ụlọ ahụ, onye nke ọ bụla jikwa ihe agha ya n’aka. 11 Ha wee kpọpụta nwa eze+ ma kpuwe ya okpueze,+ dokwasịkwa Ihe Àmà+ ahụ n’isi ya wee mee ya eze. Jehoyada na ụmụ ya wee tee ya mmanụ+ wee sị: “Eze, ị ga-adị ndụ!”+ 12 Mgbe Atalaya nụrụ mkpọtụ nke ndị na-agba ọsọ ma na-eto eze,+ ọ bịakwutere ha n’ụlọ Jehova ozugbo. 13 O wee hụ, ma, lee, eze guzo n’akụkụ ogidi ya+ nke dị n’ebe mbata, ndị isi+ na ndị na-afụ opi+ guzokwa n’akụkụ eze, ndị niile bi n’ala ahụ nọkwa na-aṅụrị ọṅụ+ ma na-afụ opi,+ ndị na-abụ abụ+ bụ́ ndị ji ngwá egwú nakwa ndị na-eduzi otuto a na-enye nọkwa na-aṅụrị ọṅụ. Ozugbo ahụ, Atalaya dọwara uwe ya wee sị: “Izu ọjọọ! Izu ọjọọ!”+ 14 Ma Jehoyada onye nchụàjà kpọpụtara ndị isi nke otu narị otu narị ndị agha, bụ́ ndị isi ndị agha, wee sị ha: “Kpọpụnụ ya n’ebe a unu gbara gburugburu;+ werekwanụ mma agha gbuo onye ọ bụla nke na-eso ya n’azụ!” N’ihi na onye nchụàjà ahụ sịrị: “Unu egbula ya n’ụlọ Jehova.” 15 Ha wee jide ya. Mgbe o rutere n’ebe ịnyịnya si abanye n’ọnụ ụzọ ámá ụlọ eze, ha gburu ya n’ebe ahụ ozugbo.+ 16 Jehoyada na mmadụ niile na eze wee gbaa ndụ na ha ga-abụ ndị Jehova.+ 17 E mesịa, mmadụ niile gara n’ụlọ Bel wee kwatuo ya;+ ha kụrisịkwara ebe dị iche iche a na-achụrụ ya àjà+ na ihe oyiyi ya dị iche iche.+ Ha gbukwara+ Matan+ bụ́ onye nchụàjà Bel n’ihu ebe ịchụàjà ndị ahụ. 18 Jehoyada nyefekwara ọrụ ndị dị n’ụlọ Jehova n’aka ndị nchụàjà na ndị Livaị, bụ́ ndị Devid+ kere n’ìgwè n’ìgwè ilekọta ụlọ Jehova ka ha wee na-achụ àjà nsure ọkụ Jehova dị ka ihe e dere n’iwu Mozis si dị,+ jirikwa ịṅụrị ọṅụ na abụ na-eme nke ahụ dị ka ntụziaka Devid si dị. 19 O wee debe ndị nche ọnụ ụzọ ámá+ n’ọnụ ụzọ ámá+ ndị dị n’ụlọ Jehova ka onye ọ bụla na-adịghị ọcha n’ụzọ ọ bụla ghara ịbata. 20 O wee kpọrọ ndị isi nke otu narị otu narị ndị agha+ na ndị ukwu na ndị na-achị ndị mmadụ na ndị ala ahụ niile, ha wee si n’ụlọ Jehova kpọdata eze.+ Ha wee si n’ọnụ ụzọ ámá nke dị n’ebe mgbago bata n’ụlọ eze wee mee ka eze nọkwasị n’ocheeze+ nke alaeze ahụ. 21 Ndị ala ahụ niile nọ na-aṅụrị ọṅụ;+ obodo ahụ enweghịkwa nsogbu ọ bụla, ha jikwa mma agha gbuo Atalaya.+
2 Ihe E Mere 23